Misaotra Anao indrindra izahay JESO KRISTY raha mbola omenao indray izao volana vaovao izao izay mbola ahazoanay midera sy miantso ny anaranao lehibe indrindra.
Mangataka Aminao aho ny itoeranao sy ny Fanahy Masinao ao amin ny tokantranonay ary indrindra hiasa aminay hatrany Ianao amin izay rehetra ataonay.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 10 novambra 2016)
Mangataka Aminao izahay Andramanitra o! mba ahafahanay BACCalaureat @ ity taona ity.
(nosoratan'i Andrianarimamy tsiriniaina safidy tamin'i 26 novambra 2016)
tokatrano tokatrano :
Mangataka @ jeso handaminany ny tokatranoko
(nosoratan'i Aro tamin'i 24 oktobra 2016)
Ray ô Andriamanitro Ianao midera Anao sy misaotra Anao aho,
Manome voninahitra ny Anarao Masina satria mendrika Anao loatra izany.
Tanteraho amiko Ray ô ;ny mba hananako ny fahendrena sy ny fahamasinana,ary ny herin'ny Fanahy Masina ahafahako manatanteraka ny sitra-ponao.
Omemboninahitra ny Anarao Ray ô @ anaran'i Jesosy Kristy Amen!
(nosoratan'i Jacki Charli tamin'i 12 oktobra 2016)
TOMPO O, misaotra sy manome voninahitra Anao amin ny famindrampo omenao isan andro.
Mametraka mandrakariva ny fiainanay Aminao izahay ary mametraka indray izao volana vaovao izao ampelantananao.
Misaotra indrindra TOMPO O. AMENA.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 4 oktobra 2016)
Jesosy o ! misaotra indrindra ny @ fahasoavanao sy ny famindraponao hoan'ireto mpanomponao zay mihaona eto @ty rindrimbavaka ity,
Miharihary eo anatrehanao zay tsi11 avy, mamelà ny helokay ary aoka ny famindraponao hitoetra aminay mandrakariva, ny fiadananao anie Jesosy Kristy hitoetra betsaka aminay, dia ho Anao irery ihany ny voninahitra !
Misaotran Jesosy o, Amen
(nosoratan'i NoroB tamin'i 29 septambra 2016)
Dieu tout puissant mon Papa.
Mon Pere Celeste au nom de Jeso Christ le Roi de ma vie, le Roi de mon coeur mon Sauveur..
Misaotra fa tsy vita tanisaina ny fahasoavanao sy ny fitahiana nomenao ah sy ny ankohonako.
Misaotra fa famndram-ponao ny mbola amelanao ahy tafiditra eto ndray..afahako mjoro vavolombelona fa mamaly vavaka foana foana Hianao..
Misaotra fa marina mandrakariva ny Teninao ka izay tahianao dia voatahy mandrakizay amen.
Misaotra fa mbola avelanao manavao ny fanolora-tena ho Anao aho.
Matoky,mino ary manaiky Anao aho Jeso Andriamanitra velona mandrakizay..ALLELUIA
(nosoratan'i RHC tamin'i 27 oktobra 2016)
Tsy mitsahatra ny Misaotra sy Midera ny Anaranao zahay ry Tompo malala o!
Noho ny famindram-ponao,ka nintantananao iny herinadro iny (8aout 2016) ka nahavitanay dingana lehibe antoky ny ho avinay , Ianao tokoa no nialoha lalana anay ! ary mampianara anay hatrany hankasitraka izay tendrinao,hankato Anao.
Misaotra Tompo o fa mbola afaka miantso ny anaranao izahay.
Apetrakay tanteraka eo am-pela-tananao ny fotoana rehetra holalovanay @ dingana manaraka.
Ho Anao irery ihany anie ny Voninahitra, ny Dera sy Laza mandrakizay.
Amin'ny anran'i jesosy zoky be fitia.
(nosoratan'i 3f tamin'i 11 aogositra 2016)
Manantona Anao am-panetre tena tokoa izaho Tompo fa diso sy meloka eo anatrehanao, fantatro Tompo malala o fa tsy mety ny nataoko ary tena menatra Anao aho fa sady tsy mendrika no tsy tanteraka ihany koa, nefa vonona aho ny hanaraka Anao ary mangata-pamelna sy fanadiovana amin'ny ranasoa izay nalatsakao tany Kalvary.
Manantona Anao aho raiso ary antsotray ny tananao Jeso malala o fa mila Anao aho tena mila Anao fa very aho ee
Apetrako ao an-togontrao izany vavaka izany Amen
(nosoratan'i noe tamin'i 26 aogositra 2016)
Tompo malala o! misaotra anao izahay fa mbola nomenao tombonandrom-pahavelomana.
Mamela tompo ny heloka rehetra izay vitanay, midina fanahy masina o! mitari-dalana anay; Tompo o!
Mangataka aminao izahay ny mba hanomezanao anay tany na trano izay sahaza ny volanay mba ho an'ny taranakay,
Misaotra Tompo o!
(nosoratan'i TAHINA tamin'i 21 septambra 2016)
antso antso :
Misaotra Anao mandrakariva izahay JESO ny mbola nitantananao ny androany rehetra ary mbola mangataka ny mbola hiaraka Aminao hatrany amin ny andronay rehetra.
Mametraka ny fiananay am pelantananao ary mifona amina ny fahotana vitanay JESO satria meloka eo anatrehanao izahay.
Amin ny anaranao no anaovana izany vavaka izany.
Misaotra TOMPO O. Amena
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 12 septambra 2016)
Ny Fahatsaran'Andriamanitra Ny Fahatsaran'Andriamanitra :
Ry Tomponay Mpamindra fo any andanitra ô!
Misaotra nohon'ny nanomezanao ny andro iainanay hahafahanay mibebaka eto am-pototry ny hazofijalianao,koa ampio izahay mba tsy hiala amin'izany fahatsaranao izany. Amin'ny alalan'i Zanakao Malalanao no hanaovanay izany vavaka izany!
(nosoratan'i Iandry tamin'i 15 septambra 2016)
TOMPO O, miantso Anao izahay mba itoeranao mandrakariva aty anatinay ary indrindra JESO ny hamelanao ny helokay.
Mifona amin ny fahotana vitanay izahay ka aoka Ianao irery ihany no hiaro anay.
Hapetrako ampelantananao JESO ny hetahetan ireo zanako raha sitrakao.
Amin ny anaranao irery ihany no hanaovako izany vavaka izany. Amena.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 5 jolay 2016)
vavaka afaka @ fahafaham-baraka ;avereno eo amin' ny fanompoana zanakao Andriamanitra ô !
(nosoratan'i jeannot tamin'i 21 jolay 2016)
MIVAVAHA KA AZA MITSHATRA FA NY TOMPOTIANAO AMIN NY ANDRONAO REHETRA.
AZA MIERIKERIKA FOANA NA MANAHY FA IZAY REHETRA NOTENENINY DIA TSY MAINTSY TANTERAHANY AVOKOA REHEFA TENA MINO SY MATOKY AZY AMIN NY FONAO REHETRA IANAO KA MANAO NY MARINA EO ANATREHANY.
(nosoratan'i Anonyme tamin'i 11 jona 2016)
JESO KRISTY irery ihany no TOMPO sy MPAMONJY antsika ary afaka manafaka antsika amin ny fatotra ataon ilay ratsy.
Mitondra antsika amin ny fiadanana sy ny fahasoavana izy.
Mahereza mivavaka ary aza mitsahatra fa ny TOMPO mihaino anao.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 6 mey 2016)
mpanenjika mpanenjika :
Jesosy Kristy tompoko o.
Maro ny olona nampiako no manenjika ahy ankehitriny, mivavaha ho an'i Eric mivady, Naval, GÃ©lin mba hiova fo izy ireo fa tsy fantany izay ataony.
Mamindra fo amin'ireo mitsangana ho fahavaloko. Amena
(nosoratan'i Ranto tamin'i 22 jolay 2016)
tany tany :
Misaotra Tompo, noho ny famindramponao izay nomenao anay, mangataka aminao aho Tompo ny mba hanomezanao anay tany hanorenana trano ho an'ny taranaka faramandimby.
Voninahitra anie Tompo hitoetra ao aminao mandrakariva.
(nosoratan'i tahina tamin'i 27 aprily 2016)
Fanenjehana Fanenjehana :
Mangatabavaka ny hampitodika ny sain'ny lehiben'nyorinasa tsy hino ny lainga rehetra foronin'ny olona iray hanenjehana ahy eo aminn'ny lafin'ny asa
(nosoratan'i RASOATAHIRIZANANIVO Lucie tamin'i 13 aprily 2016)
Misaotra Anao aho Tompo Andriamanitra fa tonga soa i RKR.
Misaotra fa nasehonao anay fa maÃ®trisernao ny zavatra rehetra ary ny fotoananao sy ny kajinao dia no tsara sy marina.
Deraina Hianao Jeso Tomponay fa lehibe ny voninahitrao ary mamirapiratra eo @ fiainanay.
Atolotro Anao ny dera,haja,laza, ary mankasitraka Tompo Anaoaho.
@Anaranao Jeso Mpamonjy sy Mpisolovava anay eo anatrehan'ny Ray no hanaovako izao vavaka izao.
(nosoratan'i mama tamin'i 4 aprily 2016)
Mangataka Mangataka :
TOMPO O, misaotra indrindra amin ny fahasoavana izay tsy tapaka asehonao aminay ary matoky fa hamela heloka anay IANAO.
Hapetrako am pelantananao ny hataka izay ataoko ny henoinao ny vavaka asandratray dia ny mba handehanan izy sy dahy hanohy ny fianaran izy ireo any am pitan dranomasina raha sitrakao TOMPO.
Amin ny anaranao no angatahiko izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 14 aprily 2016)
Mitalaho Mitalaho :
Ray o! menatra aho ny anantona Anao satria ny ratsy teo imasonao no efa vitako, mamindrà fo amiko ry Jesoa Kristy Mpamonjy o! ary mangataka aho, mitalaho Tompo o! mba afao @izao fahotana mangeja ahy izaho aho.
Te ho Anao aho ary tsy anao hafa tsy ny sitraponao irery ihany.
Koa ampijoroy aho, ampianaro hifikitra aminao mba ho tonga olona araka ny fonao izay anao ny sitraponao rehetra.
@anaran'i Jesoa, amen.
(nosoratan'i flavienne tamin'i 7 aprily 2016)
Tompo o, misaotra Anao mandrakariva izahay fa mbola nomenao ity herinandro masina ity ahazoanay misaotra sy manome voninahitra Anao amin ny andronay rehetra.
Hitondra Fandresena ho anay anie TOMPO izao Paska 2016 amin izay rehetra ataonay indrindra amin ny fanompoana Anao amin ny andronay rehetra.
Misaotra indrindra TOMPO mbola mamindra fo aminay Ianao na dia ratsy aza izahay ary matoky sy mino fa ho avelanao ny helokin ny olona rehetra izay mitady indrindra Anao.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 25 martsa 2016)
Dada ô!!.Dadako @ alalan'i Jeso Tompo Zokiko.
Miantso Anao aho satria te hisaotra Anao noho ireo resaka rehetra natao t@ny ankizy any Canada ary mametraka ny fikasana rehetra eo ampelatananao,ny fanirianay mivady te hiara-hiainga,ny vola entimanana sy handaminana ny asa,i H.sy ny trano ilaozana.
Matoky Anao izahay DADA a fa hainao atao sy alamina ny zava-drehetra apetraka eo ampela-tananao.
Mino izany aho ary manaiky @ foko sy ny saiko ary ny Fanahiko rehtra izay fitondranao aho.
Mankasitraka Tompo Tsitoha ô.
(nosoratan'i neny tamin'i 31 martsa 2016)
Ry Jeso Zokiko malala ô,
Misaotra noho ny Teninao androany maraina Rom 8/33 :
IZA NO HIAMPANGA
ANDRIAMANITRA NO MANAMARINA AZY.
Raha nifona taminao aho Tompo d io no Teny azoko androany.Mino aho fa avy Aminao io.
Misaotra indrindra Jeso tia ahy ô ; @ anaranao no anaovako izao vavaaka izao;amen.
(nosoratan'i rhc tamin'i 18 martsa 2016)
Dieu toutpuissant mon Papa au nom de Jesus Christ.
Misaotra, mankasitraka, midera,mankalaza,mitsaoka, manandratra ny Anaranao Avo indrindra ny foko sy ny saiko manontolo ary ny Fanahiko rehetra.
Tompo ô.Hianao mahita ny ato anatiko miredareda fitiavana Anao sy mangetaheta te hidera Anao.
Te hiaka mafy aho hoe:TSARA NY TOMPO,hobio IZY, atolory Azy ny voninahitra lehibe ary hoAZY irery.
@ Anaranao ry Jeso Kristy Tompo Lehibe Mpanalalana
fangatahambavaka fangatahambavaka :
mangataka vavaka aho mba tena ho afahan' ny Tompo Jesoa fa mahatsiaro mijaly @ fatotry satana.
(nosoratan'i randriatianarison tamin'i 29 martsa 2016)
TOMPO O, misaotra Anao mandrakariva izahay fa mbola nomenao tombonandro ka afaka midera sy manome voninahitra Anao amin ny andronay rehetra.
Mangataka Aminao aho ny handrotsahanao ny Fanahy Masinao aty aminay mba ahazanay midera sy mankalaza Anao.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 3 martsa 2016)
Misaotra sy manome voninahitra Anao izahay ay MIANTSO ANAO mba hitoetra eto amin ny fiainanay mandrakariva.
Aza avela irery izahay JESO fa mbola betsaka ny herin ilay ratsy mitadi hamotraka anay.
IANAO irery ihany no afaka hanala ny fahotana izay misy aminay.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 8 martsa 2016)
Ry Tompo ANDRIAMANITRA Ray, Rainay @ Anaran'i Jeso Kristy Masina sy Marina.
Manandratra vavaka aho izao mba arovinao TSY IVERIN-DALANA aho Tompo @ fanompoana Anao ary @ fitiavana Anao.
Ataovy matoky Anao foana foana ary tsy hiala mandrakizay eo an-tananao.
(nosoratan'i rhc tamin'i 4 martsa 2016)
Miantso Anao aho TOMPO fa te hidera Anao amin ny foko rehetra, na dia maro aza ireo manakana entin ny satana atao anay dia IANAO irery no afaka manala ny fahotanay rehetra.
Misaotra indrindra TOMPO ary mangataka ny famindram ponao ny hamelanao ny heloko.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 16 martsa 2016)
Ry Andriamanitra Rainay @ Anaran'i Jeso Kristy ô !!
Hianao Jehovah ô no Andriamanitro ka asandrato amiko ny fahazavan'ny tavanao ka @ fahazavan'ny tavanao no handehanako.
@ Anaranao Jeso Kristy no anaovako izao vavaka izao, ilay Anarana mahagaga.
Miandrandra valimbavaka avy Aminao aho Zoky a.
(nosoratan'i Hali Christiane tamin'i 7 martsa 2016)
FAHATOKIANA FAHATOKIANA :
Misaotra Anao Ray, Raiko @ alalan'i Jeso Kristy Tompo, fa mbola afaka miditra eto hivavaka hoany hafa ary hitondra ambavaka ihany koa ny ankohonako sy ny fikasana rehetra,
Matoky Anao aho fa ef noraisinao ny fikasanay rehetra ary Hianao no manatanteraka ireny araka ny fahefanao sy @ fotoananao.
Mamindrafo aminay Jeso ka diovy @ Ranao izahay,fa izay no ahitanay ny voninahitrao.Misaotra Jesosy ô! fa ny Anaranao irery no hanaovako izao vavaka izao.
(nosoratan'i RHC tamin'i 24 febroary 2016)
Ry Tompo Andriamanitra Rainay ô! Rainay @ Anaran'i Jeso KRISTY Mpamonjy sy Mpihaino vavaka ary Mpamaly vavaka anay.
Misaotra fa mbola afaka miantoraka Aminao zahay.mipololotra ato ampoko ny fankasitrahanao Anao satria mbola avelanao miantso sy mangataka Aminao ndray aho.
Satria hoy Hianao Jeso hoe AZA SASATRA MAMPATSIAHY NY TOMPO ZAY EFA NEKENY OMENA FA HOTANTERAHINY IRENY.
Ka dia inty ndray aho mangataka sy mametraka Aminao mba ho vita ny famenoina le formulaire ary mba ho voaray h@farany ny dossiern'ny zanako.
Misaotra ary @ Anaran'i JESO KRISTY no anaovako zao vavaka izao.
(nosoratan'i RHC tamin'i 5 febroary 2016)
Tompo masina sy tsara indrindra o!
Misaotra Anao fa mbola velon'aina noho ny fahasoavanao.sady velona feno ny fitahianao,manana ny ampy,mahazo valimbavaka,mahita fitia eo imasonao,mandray ny famindramponao, mahita ny voninahitrao.
MISAOTRA INDRINDRA,misaotra fa efa nandalo teo imasonao daolo ny zavatra rehetra mandalo eo @ fiainanay.
Jeso Kristy zoky a!raiso ka anjakao ny foko ,saiko,Fanahiko;raiso ny amiko rehetra,ny fikasana,@lafiny rehetra fa eo Aminao no azo antoka indrindra.Ataovy @ze programanao Jeso a.
Atolotra Anao ny dera sy haja ny voninahitra ary hoanao irery mandrakizay.
(nosoratan'i RHC tamin'i 26 janoary 2016)
Fifadiankanina Fifadiankanina :
Ry Andriamanitra Ray Zanaka Fanahy Masina ô! miditra eo ndray aho fa te-hisaotra sy ankasitraka ny fitantananao ny fiainako.
Notarihinao aho Fanahy Masina ô hanavao ny fanoloratenako sy hibebaka ary hametraka ny hoavinay eo Aminao @zao andro fifadiankanina izao.
Mino aho Jeso fa Andriamanitra mpamaly vavaka Ianao.
@ Anaranao Jeso no hanaovako izao vavaka izao.
Mivavaka hoan'ireo olona rehetra miantso Anao iany koa aho ry Tompo mba ahita fitia eo imasonao ka ahazo valimbavaka.ALLELUIOA. AMEN
(nosoratan'i RHC tamin'i 29 janoary 2016)
Fifaliana b ho ahy ry Jeso Tompoko sy Andriamanitro ny nandrenesako fa vita ary feno tsara daolo ny formulaires demande de CSQ;
Avy Aminao no nahavitana izany ka isaorako Anao indrindra.
Hoavy ny date de soumission 16 fevrier zao,ka mangataka indray mba homba izany demande zany Hianao ka ho tafiditra aloha indrindra io demandeny H.io..
Matoky Anao izahay ary mino fa hainao atao izany satria anao anie ny fahefana rehetra e.
Misaotra sahady toy ny efa naazo valim- bavaka aho ry Jeso koa raiso ny fisaorana,ny dera,ny haja ary indrindra ny Voninahitra fa mendrika ANAO izany ary Anao irery ihany.
(nosoratan'i Neny tamin'i 8 febroary 2016)
Fisoarana sy fankasitrahana Anao ry Tompo Andriamanitra Raiko,
Raiko @ alalan'i Jeso Kristy Mpanavotra ahy sy ny ankohonako, izany no mipololotra avy ato ampoko sy mivoaka ny vavako, satria nahatratra nt taona 2016 noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao.
Jeso Mpanjaka malaza no Tompo Mpanjakanay Mahery sy tsara indrindra ka Izy no aronay.
Mendrika ankalazaina ny fandaharanao ry Dieu tout puissant mon papa,mon papa au nom de Jesus Christ mon grand frère.
(nosoratan'i RHC tamin'i 5 janoary 2016)
Amin ny anaran i JESOA KRISTY AVY ANY MAZARETA no anaovako izao fisaorana lehibe izao ny mbola nanomezany tombonandro ho antsika olombelona rehetra na iza na iza.
Hisaotra sy hidera azy mandrakariva anie isika ary hanetry tena eo ambany fahasoavany mba ahazoany manone ilay fiadanana sy fitiavana ary ny Fanahy Masina hitoetra mandrakariva amintsika rehetra.
Aoka isika hahery hivavaka ka hametraka ny fiainantsika rehetra Aminy.
Ho azy ny voninahitra.
(nosoratan'i Mme Sylvie tamin'i 8 janoary 2016)
MATOKY MATOKY :
Misaotra ry Tompo Andriamanitra Rainay,Rainay @ alalan'i Jeso Kristy Tomponay.
Misaotra fa nahita ny fahatsaranao izaho sy ny ankohonako.
Deraina ny Anaranao masina ry RAY ZANAKA FANAHY MASINA.
Mangataka Anao aho Tompo handray antanana ny demande de visas permanent hoan'i RHT.
Enga anie fa ahazo izy satria mahita fitia eo imasonao.
Misaotra indrindra ry Jeso Zoky malala a
@ ANARANAO JESO KRISTY TOMPO ANDRIAMANITRAY.AMEN
(nosoratan'i RHC tamin'i 15 janoary 2016)
Momba ny asa Momba ny asa :
Mandalo ady amin'ny asa, mangataka vavaka mba harovan'ny Tompo ny service-ko tsy ho tafasaraka, mba hilamina sy tony ity taona 2016 ity, ary mba hisy fivoarana koa ny asanay.
Ho betsaka ny dossiers traiter-na fa lazain'ny lehibe fa tsisy asa, dia mitaintaina foana lalandava.
Mangataka vavaka koa mba hitoetra amin'ny finoana sy fankatoavana an'Andriamanitra. Misaotra tompoko!a
(nosoratan'i Lisy tamin'i 20 janoary 2016)
TOMPO O. Misaotra Anao mandrakariva amin ny famindram po omenao anay.
Mangataka aho Jesosy ny hitantananao an i Neny mba ho vita soa aman tsara ny fandidiana izay atao aminy.
Mamela ny helony Jeso raha misy nampalahelo anao nataony.
Fa tsy mba mitana alahelo Ianao Tompo ary izany no hangatahiko Aminao.
Misaotra indrdra Tompo o. Amin ny Anaranao mahery no anaovako izany vavaka izany.
(nosoratan'i Mme Harisoa tamin'i 13 janoary 2016)